मोदीकाे स्वागतको लागि करोडौँ खर्चिएकाे ठाँउमा फोहोरै फोहोर – samyantra.com
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २७, २०७५ समय: ७:३७:५७
दिपेन्द्र यादव, जनकपुरधाम / दुलही झैँ सजिएको भनिएपनि प्रदेश नं. २ का राजधानी धनुषा जनकपुरस्थित १२ बिघामा वर्षाको पानी जम्नुका साथै बरपर फोहोरै फोहोर भेटिएको छ ।
विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका भारतीय प्ररधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतका लागि दुलही झैँ सजिएको भनिएपनि त्यहाँ फोहोरको ओइरो र वर्षातको पानी जमेको छ ।
मोदी आउनु अघिल्लो दिनसम्म पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई सफा बनाउनका लागि सशस्त्र प्रहरीका टोलीले हात हातमा कुचो र बेल्चा लिएर नगर सफा गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर जनकपुर भम्रणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोेदी पहिले पुजाका लागि जानकी मन्दिरमै पुग्ने भएपछि मन्दिरमा पुजाको तयारीमा पुजारी अर्थात महन्तहरु व्यस्त बनेका छन । शुक्रबार जनकपुर आउन लागेको भारतिय प्रम मोदी जनकपुर विमानस्थलमा ओर्लि्एपछि पूजाका लागि पहिले जानकी मन्दिर पूग्ने कार्यक्रम छ । मन्दिर बाहिर उनलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेपनि मन्दिर भित्र जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले स्वागत गर्ने भएका छन् ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतका लागि करोडौँ लगानी लगाएर जानकी मन्दिरको बाह्र बिधामा पानी जमेका कारण सुरक्षाकर्मीहरु अहिले पानी निकाल्न व्यस्त छन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने भ्रमणका लागि सुरक्षा दिन आएका सुरक्षाकर्मीहरु मोलीले सम्बोधन गर्ने सभा स्थल छेउमा जताततै वर्षाको पानी जमेका कारण सुरक्षाकर्मीहरु सो सभा स्थलमा जमेको पानी निकाल्नका लागि पम्पसेट प्रयोग गरेर निकाल्न लागेका छन ।
प्रदेश नं. २ मा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँन एक दिन मात्र बाँकी रहेपनि एक सता अगावैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताएको छ । धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीले तिन वटै तहका सुरक्षा अधिकारीहरु सँग समन्वय गरी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा परिएको बताएका छन् ।
एकसाता अघि मात्र सुनसरीबाट सरुवा भई आएका धनुषा जिल्लाका प्रजिअ गोपाल प्रसाद पराजुलीले धनुषामा सुरक्षा चुनौतिको बावजुद पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जानकारी दिए । प्रजिअ पराजुलीले दिएको जानकारीअनुसार धनुषा जिल्ला प्रदेश नं. २ को राजधानी भएको कारण त्यसैपनि सुरक्षा चुनौति रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोली शुक्रबार नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा पटनाबाट सीधै जनकपुर आउदै छन् ।
यता जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतको तयारीका लागि ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको र अब केही काम माात्र बाँकी रहेकाे बताए ।